Imvelisogadget | Isilimela 2022
Izibonelelo ezi-5 ezibalulekileyo zokusebenzisa iNethwekhi yangasese yangasese (VPN)
Abantu bazama ukufumana eyona ndlela yokuthintela abanye ukuba basilandele ngexesha lokuntywila. inethwekhi yabucala enokubakho iya kuba sesinye sezona zisombululo zibalaseleyo.
Izibonelelo ezi-8 eziphezulu zokusebenzisa ukukhanya kwe-LED
Izibane ze-LED zezona zintsha kwaye zinomdla kakhulu kwezobuchwephesha kwishishini lokukhanyisa. Ezi zezi zibonelelo ziphezulu ezi-8 zokusebenzisa izibane ze-LED.
Iindlela ezi-5 eziSebenzayo zokuNxibelelana neMillennials
Ukunxibelelana newaka leminyaka kwahluke kakhulu namhlanje. Nazi ezinye zeendlela ezifanelekileyo zokunxibelelana nabo.
I-7 yezona ndawo zintengiso zeWebhusayithi
Fumana ezona ndawo zibalaseleyo apho iindawo kunye neewebhusayithi zithengiswa kwaye zithengiswe. Nalu uluhlu lwe-7 yezona ndawo zentengiso zibalaseleyo zokutsiba kwiwebhusayithi.
Iingcebiso ezi-7 zokukhetha ikhibhodi efanelekileyo yeKhompyuter yakho
Xa ikhibhodi yakho kufuneka itshintshwe, ubuya kuya ngohlobo olufanayo lwebhodi yezitshixo oqheleyo. Kodwa isenokungabi yeyona ilungileyo kuwe.
Isibhedlele sanamhlanje: Sebenzisa iTekhnoloji yoGcina uBomi
Itekhnoloji ivumela ezona zibhedlele zikumgangatho ophezulu zehlabathi ukuba zibambe kwaye zinyange izifo ngokukhawuleza kwaye zisebenze ngakumbi kunangaphambili.
Izinto ezi-3 zokuQaphela ngaphambi kokuthenga ii-Earbuds
Ukuthenga izinto zeendlebe kunokuba yinkqubo yokudideka ukuba awuyazi into oyifunayo. Ezi zilandelayo ziingcebiso zokukunceda wenze eyona nto uyithengayo.
Iindlela ezi-6 eziMangalisayo zeDrones ziyasetyenziswa namhlanje
Iidrones azisekho kwimfazwe. Abantu ngoku basebenzisa iidrones ngeendlela ezininzi ezoyikekayo.
Iingxaki zeWindows ngokuQala ukuKhangela
IWindows njengoko sonke sisazi yinkqubo esebenzayo kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye ilaptop. IiWindows ziyinkqubo yokusebenza eveliswa ikakhulu yenziwa yiMicrosoft
Iitekhnoloji eziGcina uBomi ezi-7 zeLizwe langoku
Zeziphi iitekhnoloji ezinokubusindisa ubomi bethu xa kuvele imeko kaxakeka? Nazi ezinye zezo teknoloji zisindisa ubomi.
Kutheni umculo uvakala ngcono kwii-headphone?
Ngaba ucinga ukuba umculo uvakala ngcono kwii-headphone zakho? Umculo uvakala ngokwahlukileyo kwii-headphone, kwaye une-physics yokubulela ngaloo nto.
Khetha i-Comfort yeZiko lakho loNxibelelwano eliLandelayo
Ukuba ungumphathi olawula indawo yokufowuna, uyazi ukuba unokhetho loluphi uhlobo lwee-headsets onokuzithenga. Unokukhetha kwiimpawu kunye netekhnoloji.
Izinto ezi-8 zokwazi ngaphambi kokukhetha iZikhewu zombane
Izixhobo zokucheba ngombane zilula kwaye kulula ukuzisebenzisa. Izinto ezi-8 zokwazi ngaphambi kokukhetha iZikhewu zombane.
Ukhuseleko lweLipo: Isikhokelo soKhuseleko lokuSebenzisa iiLithium Polymer Battery Charger
Isikhokelo sokhuseleko sokusebenzisa itshaja yebhetri ye-lithium polymer
Izibonelelo ezi-7 zokuThengisa ii-Elektroniki zakho eziSebenzisiweyo kwi-Intanethi
Abantu bahlala bebuza ukuba yeyiphi eyona nto iphambili malunga nokuthengisa kunye nokuthengisa izixhobo ze-elektroniki abazisebenzisileyo kwi-intanethi. Izibonelelo zokuthengisa izinto ezisetyenziswayo kwi-Intanethi. Izixhobo zombane ezisetyenzisiweyo
Ungaze uphinde ulale kwivili kwakhona
Ukozela kwivili kubulala amawaka abantu minyaka le. Zikhusele ngokunxiba i-Steer - isacholo esahlukileyo esikugcina uphaphile xa uqhuba.
Iibhanki ezi-10 eziGqwesileyo zaMandla zokuPhakamisa ifowuni yakho ngokuthanda kwakho ekuhambeni
Ukuba ungxamile, ukuba nefowuni efileyo bubusuku obubi. Khetha enye yeebhanki zamandla ezilungileyo kuluhlu lwethu kwaye ungaze ube nexhala ngesixhobo sakho esiza kuphinda sife.
Ngaba Izinto Zakho Zonakele? Fumana eli Qela lokuKhangela
Ngaba uphulukana nezitshixo zakho amaxesha amaninzi kunokuba ubungathanda? Zama ukusebenzisa le app iluncedo kunye negajethi ukufumana zonke izinto zakho ezibekwe endaweni engeyiyo ngokukhawuleza kwaye ngokulula!
Iindlela ezi-6 zetekhnoloji iyatshintsha indlela esiphila ngayo
Itekhnoloji inegalelo elikhulu kwindlela esiphila ngayo namhlanje. Le posti yebhlog ixoxa ngendlela ezintsha ezitshintsha ngayo indlela esiphila ngayo.
Iindlela ezi-7 eziyinyani eziyinyani ziya kuguqula ikamva.
Itekhnoloji iphucule kakhulu kule minyaka ili-15 idlulileyo, nazi iindlela ezisixhenxe ezinokuthi zisichaphazele ngayo iVR kwaye zinokutshintsha ikamva lethu.